isiRashiya akemi namanje. Yena agcwaliswa amagama ahlukene kakhulu. Kunezindlela ezihlukahlukene ukwakha amagama. Omunye wabo kusekelwe yokuthi abaningi babo kufika kithi evela izilimi futhi ukuzwana kahle, ngetimo letisha.
Ngokwesibonelo, inqubekela-phambili nentuthuko yokukhuluma zethu ziye zaba ingxenye amazwi anjengokuthi "isithwebuli", "iphrinta", "imishini yokukopisha", "i-computer". Kugcine "owazala" leli gama elithi "Geek", "nge-computer" futhi "Scanner" - igama eliyisenzo elithi "scan".
Abanye abasebenzisi baye bazama ngisho scheme efanayo isenzo uhlobo "Xerox". Kodwa ukuze uthole cacophonous elithi "Umbukiso Wesithombe Sokusakaza" futhi "otkserit" ukuthi indoda Russian akakubangeli izinhlangano emnandi. Ngakho-ke, lezi nemikhiqizo kukhona tento, kwanqunywa ukuwakhipha kusuka ukusetshenziswa, kufakwe endaweni yawo inhlanganisela "wenze ikhophi" noma "ukufothokhophwa".
By the way, nicabanga ngalezi "izingane" umqondo, kungenzeka ukuhlonza ezinye izindlela ukwakha amagama isiRashiya. Ngokwesibonelo, igama elithi "ifothokhophi" yavela ngenxa ukwengeza amagama "Xerox" futhi "ikhophi", la mazwi "amanzi", "umusi injini", "kushimula".
Khona-ke kukhona enye indlela - okubizwa ngokuthi zero tijobelelo. Phela, igama elithi "imishini yokukopisha" isetshenziswa inguqulo ufushanisiwe.
A "ifothokhophi" e ukusetshenziswa kwayo zemfundo kakhudlwana futhi suffixed indlela. Okungukuthi, sinesibonelo esihle lapho ngezindlela ezahlukene ngokuphelele ukwakha amagama abahilelekile kanyekanye. Futhi ngokuvamile kakhulu yilokho kanye okwenzekayo isiRashiya.
Uma ucabangela elithi "Geek", sibhekene ne suffixed kwemagama.
Njengoba sihambisana nale ndlela, kusekhona okuthiwa Postaffixal. Leli yithuba ukwakha amagama amasha ngokungeza tijobelelo - "amatende", "lo", "a", "okuthile". Ngokwesibonelo, ugeza - ugeza; ngakho - kangaka; efana - ngandlela-thile.
Bayanda ngolimi Russian 'bayazalwa' amagama amasha evelayo ngenxa nezifinyezo esetshenziswa njalo. Kwaphela iminyaka eminingi, asizange angakusho "esikoleni esiphakeme", "esikoleni esiphakeme", "traffic COP". Namuhla amaphoyisa emgwaqweni nge ezimthende unamathele eziningi ucingo izwi laughable "gibededeshnik".
Jokers siye sanikela kule nqubo, eziningi humoresques satirical, ukuhlekisa ukuthambekela kwabantu ukuze sebenzisa izifinyezo ekuphileni kwansuku zonke. Ngokwesibonelo, ukubhuqa iDemo ukuphefumula amancane club "City Inhlangano wakusihlwa nobusuku yokuphumula" indlela wavulwa.
Izindlela amazwi ekuqeqesheni nasekuqondiseni zihlanganisa ezifana ushintsho tenkhulumo. Kwakuwusuku ibinzana "yokugezela" nge sikhathi igama elithi "Igumbi" zaqala ukusetshenziswa sincipha isibalo sawo. Ekugcineni, yaphela ngokuphelele, futhi isiphawulo "suite" zaba khona ngokwalo kanye usezuze isimo ibizo. Ngendlela efanayo lapho igama elithi "ogulayo", "wesifunda", "izingane" nabanye.
Inganakwa noma prefixing indlela ukwakha amagama prefixed. Lena ngenye yama-izinhlobo ethandwa kakhulu, lapho kukhona amayunithi entsha ngosizo ticalo noma ticalo.
Kwesinye isikhathi aduduze uxhumano kwenzekani yonke indlela, futhi umphumela uba ilizwi ingxenye efanayo yokukhuluma, futhi ukhiqiza. Izibonelo tento eziningi: hamba - hamba, ugeza - ukugeza.
Kodwa kwezinye izingxenye inkhulumo ukwakha amagama amasha axube ticalo ukuze wonke izwi: induduzo - ukungakhululeki (ibizo), onamakhono - sverhodaronny (isiphawulo), manje - namanje (isandiso).
Kodwa ngezindlela eziningi ukwakha amagama avele ndawonye. Kufanele kugcizelelwe prefixed-isijobelelo, lapho amazwi akhiwa kwalokho ngesikhathi esisodwa osuselwe kokubili isiqalo nesijobelelo. Ngokwesibonelo, iwindi - sill, ukunyakaza - kubathene, udonga - Ukunquma, entsha - entsha, wesithathu - wesithathu.
Kukhona okuningi izingxenyekazi-Postaffixal hlobo. Izibonelo zibandakanya amagama alandelayo: Geza - ukugeza, ubuthongo - ubuthongo.
Futhi akuve kuvamile ngamagama Russian kwakhiwa indlela izingxenyekazi-Isijobelelo-Postaffixal. Ngokwesibonelo, ugeza - ugeze, ihlaya - pereshuchivatsya.
Anaphora - isifenqo
Ethula isichazamazwi - Iyini?
Sokwenziwa ngokungabi bikho amazinyo. Sokwenziwa: izinhlobo kanye namanani
Ukudla zokwelapha e osteochondrosis
Sony C2305 - imodeli ukubuyekeza, izibuyekezo zamakhasimende nochwepheshe
Imithetho eyisisekelo Ukukhetha nettop
Izimiso nemisebenzi yentela
Omelette: iresiphi. Epanini uyithose ukwenza isidlo a aluhlaza
Amagilebhisi "isilondolozi": incazelo ezihlukahlukene
Uyini Priority Pass? Kanjani ukuze uthole Priority Izibuyekezo Pass ikhadi ngakho